Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-agba ọsọ agba agba Zidine Zidane Childhood Story Plus Na-agbaghasị Ihe Ndị Na-akpata Echiche
LB na-egosi Full Story of a Football Legend kasị mara aha na aha njirimara; 'Zizou'. Anyị Zidine Zidane Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Nyocha a gụnyere akụkọ ndụ Zidine Zidane tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ obere amaara ama banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ọ na-arụ kama ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-ele Zidine Zidane Biography Akụkọ nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka anyị bido.
Zidine Zidane Akụkọ nwata - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Zinedine Yazid Zidane mụrụ na 23 nke June 1972 na Marseille, France site na Smaïl Zidane (nna) na Malika (nne) ha abụọ sitere na Algeria.
Zidane tolitere na La Castellane, ụlọ mmebi iwu na Marseille, obodo ọdụ ụgbọ mmiri dị na ndịda France. Ewezuga mpụ, enweghị ọrụ na ọnụ ọgụgụ igbu onwe onye dị oke egwu na mpaghara ndị mba ọzọ.
Nna ya, Smail Zidane nwere ọrụ na-arụ ọrụ dị ka onye nlekọta ụlọ ahịa na-ehihie abalị, ọ bụ ezie na ndị ezinụlọ ga-ebi n'ebe siri ike-ọ bụghị mmadụ asaa ahụ pụrụ ịnọdụ ala ma rie. Nke a mere ka nwata Zizou mepee ọchịchọ iji kwụsị ịda ogbenye n'ezinụlọ ya.
Zidine Zidane Biography Eziokwu - Mmalite Ọrụ:
E webatara ya na egwuregwu nke football mgbe ọ dị obere afọ ise yana ụmụaka ndị agbata obi bi ya gburugburu.
N'oge ahụ, enweghị olileanya maka North African French Migrant na egwuregwu ahụ. N'ezie, Zizou bụ onye setịpụụrụ ndị ọzọ ihe nlereanya ịgbaso.
Maka ndị enyi ya si mba ọzọ, football bụ naanị egwuregwu ịhapụ oge. maka Zizou n'onwe ya, football bụ ọchịchọ iji kwụsị ịda ogbenye nke dakwasịrị ezinụlọ ya na ndị ọ hụrụ n'anya. Ọ dịghị oge tupu mmalite mmalite nke ọma jidere anya ndị ama ama egwuregwu.
N'ihi ya, ọchịchọ ya ịdebanye aha na ụlọ ịgba egwu ntorobịa bịara buru ibu. Zizou debara aha na US Saint-Henri Football club n'afọ 1981.
Dị ka naanị onye mbịambịa Algeria nke na-egwuri egwu na klọb ahụ, Zizou na-abụkarị isiokwu nke okwu mkparị agbụrụ na ịkwa emo banyere agbụrụ ghetto ya site na ndị di na nwunye na ndị na-emegide ya.
Ọ naghị ege ha ntị. O weere ihe ọzọ nke ịhapụ ụlọ ịgba egwu maka SO Septèmes-les-Vallons ebe ọ na-egwu site na 1983 ruo 1986.
Movekwaga ọzọ na Cannes site na 1986. Ọ kwụsịrị ọrụ ntorobịa ya n'ebe ahụ na 1989. Ọ malitere ọrụ ntorobịa ya dịka 9 mana emesịrị kwaga na ọrụ 10.
Nwa Zidane - Site na Ntorobịa ruo Ọrụ Okenye.
Ntị ndị a ntị chiri na ịkpa ókè agbụrụ agbanyeghị ogologo oge mgbe ọ sonyeere ndị otu Cannes. O weere nhọrọ nke ịlụ ọgụ megide ndị na-emegbu ya.
Nke a dugara na ntaramahụhụ ka ọ nọrọ ọtụtụ n'ime ọrụ izizi mbụ ya na nhicha dị ka ntaramahụhụ maka ndị ọkpọ egwuregwu na-akwa emo ebe o si bịa.
Zidine Zidane Ndụ Ezinụlọ:
Zidine Zidane si n'ezinụlọ dị umeala n'obi. N'adịghị ka ndị agbata obi, a na-asọpụrụ ezinụlọ Zidane nke ukwuu.
Ha biri ndụ dị mma n'oge ahụ dị ka ndị ọzọ na-eme mpụ na-enweghị ọrụ.
Nna ya nke esere n'okpuru bụ onye bụbu onye ọrụ ụlọ site na ọrụ. Ọ lara ezumike nká mgbe nwa ya nwoke mere ya na football.
Nna Zidine Zidane- Smaïl Zidane.
Nne ya Malika Zidane, nke dị n'okpuru ebe a bụ onye nwebu ụlọ. Malika Zidane lara ezumike nká mgbe nwa ya nwoke mere ya na football.
Ezigbo Zidine Zidane - Malika Zidane.
NDỊ BỤ: Zinedine Zidane nwere ụmụnne 3 n'ogologo.
Inedmụnna Zidine Zidane.
Madjid Zidane (aka ekpe), Farid Zidane (aka nri ala) na Noureddine Zidane (nke dị n’elu) jikọtara ndị ezinụlọ Zidane dum na 7 May 2006 maka ezumike Zinedine na ama egwuregwu Santiago Bernabeu.
Brothersmụnna nwoke atọ nke "Zizou" na-etinyekwa aka na ijikwa ihe omume ya dịka onye ọkpụkpọ na onye nchịkwa.
SISTER: Zinedine Zidane nwere nwanne nwanyị na-eto eto aha ya bụ Lila Zidane.
Nwanyị Zidine Zidane - Lila Zidane.
Lila tinyekwara aka na ọrụ Zidane. Ọ na-ahụ maka ịchịkwa ikike ya.
Ndụ Zidine Zidane Mmekọrịta Ndụ:
Zidine Zidane Love Akụkọ malitere ebe a. Mgbe ọ dị afọ 17, Zidane zutere nwunye ya n'ọdịnihu, Véronique Fernández (a mụrụ ya Aveyron nke Spanish), mgbe ị na-egwu Cannes na oge 1988-89. Ha nwere ihe ndị mmadụ kpọrọ Ezi Ịhụnanya.
Veronique Fernandez Lentisco bụ onye na-agba egwu na ihe atụ tupu amaara ya dị ka nwunye nke onye kachasị ukwuu ndị na-agba ụkwụ na akụkọ ihe mere eme! Ọ bụ Veronique Fernandez Lentisco dị ụtọ lụrụ di na nwunye Zickine Zidane si na-agba bọl. Ha lụrụ na 1994.
Zidine Zidane Lovehụnanya Akụkọ na Veronique Fernandez Lentisco.
Mkpụrụ nke alụmdi na nwunye ha malitere ịbịa otu afọ mgbe e mesịrị. Ha nwere umu nwoke anọ n'oge edere.
Enzo Alan Zidane Fernández mụrụ 24 March 1995, Luca Zinedine Zidane Fernández (a mụrụ 13 May 1998), Theo Zidane Fernández (onye a mụrụ 18 May 2002), na Elyaz Zidane Fernández (a mụrụ 26 December 2005).
Zidine Zidane Ndụ Ezinụlọ - Childrenmụaka.
Zidanemụ nwoke anọ nke Zidane gafere Real Madrid Academy. Nwa ya nwoke mbụ, Enzo bụ onye na-eme egwuregwu mgbe Luca bụ onye na-eche nche. Theo na Elyaz bụkwa ndị etiti.
Veronique na Zinedine anọwo na ọnụ na oke ihe karịrị afọ 20 na-agụta. Na mbido, ọ malitere ida ntutu isi ya. O kwuru n'oge ahụ: “Nwunye m hụrụ m n'anya otú ahụ, ya mere, ọ bụghị nsogbu”
Zidine Zidane Biography - Ihe Echetara Ya:
Zidane nwere ike ịdị ka otu n'ime ndị dị jụụ na mbara ala, mana nke ahụ abụghị eziokwu. Ọ maara maka iwe ọkụ ya-ihe nke, dị ka ụfọdụ si kwuo, na-efu ya nrite ọzọ mmeri nke ụwa.
Eziokwu Zidine Zidane Akụkọ - Kaadị Ọrụ Red Kaadị:
Kedu ihe ga - eme ma ị nweta kaadị uhie na egwuregwu ikpeazụ nke ọrụ gị nyere na ị nweghị ike ijere nkwusioru ahụ ebe ọ bụ na ị bụghị onye ọkpụkpọ ọzọ ma yabụ na ị gaghị egwu egwu? Do na-arụ ọrụ obodo. Nke a bụ ihe banyere ZIzou.
Mgbe 'Zizou' nwetara kaadị uhie maka iwepu Marco Materazzi, ọ ga-arụ ọrụ obodo ebe ọ bụ na ezumike nka ya mere ka ọ ghara ịla n'iyi.
Ọ bụ ezie na ekwupụtaghị nkọwa nke ọrụ obodo, a kọọrọ ya na ọ ga-ejere ya ozi n'ime ọrụ enyemaka nke FIFA. Nke ahụ pụtara na ọ gaara ekpochapụ ụzọ ma ọ bụ hichaa ụlọ mposi, onye maara?
Mana ihe anyị maara bụ na ọ bụrụ na ị nweta uhie na egwuregwu ikpeazụ nke ọrụ ị na-arụ maka ime ihe ike, ị ga-ejide n'aka na hel agaghị enweta ya site na ịkwụ ụgwọ naanị.
Zidine Zidane Akụkọ Eziokwu - Red Card Record:
N'ịga n'ihu n'ikwu okwu banyere omume ọjọọ ya, Zidane nwere ihe ndekọ ọzọ n'aha ya-ihe ọ na-agaghị achọ inweta.
Ka ọ na-egwuri egwu n'egwuregwu World Cup nke abụọ ya na Saudi Arabia na 1998, French-Algerian gosipụtara ihe ọzọ dabara adaba ka ọ zoro na Fuad Anwar onye ọkpọ Saudi.
Achọpụtaghị ya ka onye ọka ikpe ahụ rụpụtara kaadị uhie uhie maka omume ọjọọ nke Zidane, na-eme ka ọ bụrụ onye ọkpụkpọ French mbụ nke izipụ mgbe ọ natara kaadị uhie na egwuregwu World Cup.
Eziokwu Zidine Zidane - Red Card History.
Na njedebe, o mezuru ya ka ọ bụrụ goolu ya abụọ na nke ikpeazụ n'asọmpi ahụ nyere France iko mba ụwa nke mbụ.
Zidine Zidane Biography Eziokwu - Cargbọ ala mbụ:
Zinedine Zidane mere mmalite ya maka Cannes mgbe ọ dị naanị afọ 16. Onye isi oche ọgbakọ ahụ nwere mmasị na okpueze ya nke na o kwere ya nkwa ụgbọ ala dị ka onyinye mgbe ọ gbanyere goolu mbụ ya na klọb. Ọ ga-echere afọ abụọ iji jide aka na ụgbọ ala ọhụrụ.
Na 10th nke February 1991, o meriri ihe mgbaru ọsọ asọmpi mbụ ya megide Nantes na egwuregwu nke Cannes meriri obere ihe mgbaru ọsọ 2 na 1.
Ọ bụ nke mbụ nke ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ ọ gara na-akara na ya ọrụ ọkachamara. Ọ nwere ike ọ gaghị enwe ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ dịka otu ga-atụ anya site na onye na-eti mpi agha. Otú ọ dị, e nwere nkwupụta na ọ kpọrọ asị na ọ nọ n'ime igbe nke onye iro ya ma na-ahụ nnọọ n'anya ịzụ ndị na-egbu egbu kama.
Zidine Zidane Mgbaru Ọsọ:
Anyị niile chetara Zidane maka ya n'isi mmalite nke 2006 World Cup. Tupu nke ahụ, e chetara ya maka ịtụnanya ọ rụrụ megide Brazil na njedebe nke iko World Cup 1998.
Na egwuregwu ahụ, o meriri ihe mgbaru ọsọ abụọ iji duzie ndị Blues na mmeri 3-0 jupụtara na Brazil. Ọtụtụ ndị maara nke a. Otú ọ dị, ihe ọtụtụ ndị na-amaghị bụ na ihe mgbaru ọsọ abụọ o meriri-ma ka bụ-nanị ihe mgbaru ọsọ abụọ o meriri megide mba America South America na ọkwa ụwa.
Ọ bụ ihe dị ịtụnanya na-egosi na ọrụ ya gbasara ihe karịrị afọ iri ma nwee ọtụtụ nkwurịta okwu megide ìgwè ndị Latin. Otú ọ dị, ihe mgbaru ọsọ abụọ ahụ bụ ma eleghị anya ndị kachasị mkpa ọ tụrụ.
Zidine Zidane Biography Eziokwu - kwalitere ọtụtụ n'ime Football:
Ọ bụ ihe arụrụala ka ọ bụrụ ihe niile ndị Alakụba na-agba ụkwụ bụ ndị malitere ogbenye na Europe.
Ọrụ ndị otu ya mere na FIFA 1998 World Cup kpaliri mmasị nke Karim Benzema, N'Golo Kante, Tiemoue Bakayoko, Thomas Lemar, Anthony Martial, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele na Alexandar Lacazette iji mee ka football bụrụ ihe dị oké njọ n'oge ndị ntorobịa ha.
Okpukpe Zidine Zidane Okpukpe:
Onweghị ihe ọ bụla belụsọ foto a dị n'okpuru ebe a na-ekwu na ọ bụ onye Alakụba dị nsọ.
Karịsịa, ịkpọ aha ụmụ ya niile Christian aha ọzọ dị na-emegide na-akọwa ya dị ka "okpukpe Muslim". Agbanyeghị, amaara ya mara na ọ na-ekwukarị Ayat al-Kursi tupu egwuregwu ọ bụla mgbe ọ bụ ndị egwuregwu bọọlụ.
Bọchị gbanwee: Mee 10, 2021
Bọchị gbanwee: Mee 11, 2021